Mon, May 25, 2020 at 2:07pm
रोल्पा, १३ भदौ गाउँकै राजबहादुर थापासँग १३ वर्षको उमेरमा विवाह बन्धनमा बाँधिनुभयो रोल्पा सुनिल स्मृति गाउँपालिका–६ गजुलकी निर्मला थापा । अहिले उहाँको उमेर २० वर्ष पुग्यो । चार वर्षीया एक छोरीसहितको असल परिवार थियो थापा दम्पतीको । थापा दम्पतीमा विस्तारै वेमेल बढ्दै गयो । राजबहादुरले श्रीमतीलाई अनावश्यक आशङ्का गर्ने, कुटपिट गर्ने र खान लाउन नदिने गर्न थाल्नुभयो । सँगै बसेर बाँकी..
काठमाडौँ, १२ भदौ विश्वभर करिब एक तिहाई मानिसहरु निद्रामा समस्या भएकाले चिन्तित छन् । अधूरो निद्रा आजभोलिका मानिसको यथार्थता हो । निद्रा नपुग्दा स्वास्थ्यलाई नराम्रो असर पुग्छ । यहाँ हामी निद्रा ल्याउने प्रभावकारी उपाय बताउँछौं । यो प्रक्रिया गर्दाखेरी शुरुमा हुश आवाज निकाल्दै मुखले सास छोड्नुस् अनि पछि मुख बन्द गरेर बिस्तारै नाकबाट सास तान्नुस् । अनि फेरि सात गन्दासम्म सास रोक्नुस्..
काठमाडौँ, १२ भदौ मनसुनी न्यून चापीय रेखा औसत स्थानभन्दा केही दक्षिणतर्फ सरेकाले आज देशको अधिकांश भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली हुनाका साथै मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जनाइएको छ । देशको पूर्वी भाग नजीक रहेको न्यून चापीय रेखाका कारण आज देशभर बदली हुनाका साथै अपराह्नपछि मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्य वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान..
काठमाडौँ, भाद्र ११ मेकअप लगाएर सुत्ने गर्नु भएको छ ? चाहे त्यो बिर्सेर होस्, बाध्यताले होस् वा थकानले, मेकअप लगाएर सुत्नु पटक्कै राम्रो होइन। मेकअपको बाक्लो लेअर अनुहारमा लगाउनु राम्रो बानी होइन। लामो समय यस्तो मेकअप छालामा राखिराख्दा छालाले वातावरणबाट पाउने अक्सिजन लगायत अन्य आवश्यक रसायन लिन सक्दैन। जसले छाला चिलाउने, पोल्ने हुन्छ। जलन गराउँछ मेकअप लगाएर सुत्न कहिल्यै सुझाव दिइदैन। अझ फाउन्डेसनले सबैभन्दा..
सुर्खेत, ११ भदौ । कर्णाली प्रदेशमा बालविवाह विरुद्धका थुप्रै कार्यक्रम भइरहेका छन् । सरकारी निकायदेखि मानव अधिकारवादी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ-संस्थाले बालविवाह रोक्न थालेको अभियानले अपेक्षित सफलता प्राप्त गरेको देखिँदैन । सबै निकायले प्रतिवेदन पनि तयार गरिएकै पाइन्छ तथापि त्यसको प्रभावकारिताले अर्थ राखेको देखिँदैन । सामान्यत : यो अवस्थालाई कर्णाली प्रदेश अस्पतालको गत आव ०७४-०७५ र ०७५-०७६ मा दिएको सुरक्षित सुत्केरी सेवाले..
काठमाडौँ, ११ भदौ पानी कम परेको र बादल पनि कम लागेकाले देशभरी नै गर्मी बढेको मौसमविद्को भनाइ छ । तत्काल नै ठूलो पानी पर्ने कुनै प्रणाली नदेखिएकाले गर्मी अझै बढ्ने मौसमविद् वरुण पौडेलले बताउनुभयो । तर पहाडी भेगका थोरै ठाउँमा भने हल्का पानी पर्ने सम्भावना रहेको उहाँले बताउनुभयो । मनसुनी न्यूनचापीय रेखा (मनसुनको समयमा वर्षा हुने प्रणाली) नेपालबाट दक्षिणतर्फ रहेकाले कम पानी..
काठमाडौँ, १० भदौ मोटोपन घटाउन लागेका मानिस प्रायः आलुदेखि टाढै बस्छन् । आलुले छिटै वजन बढाउने भएकाले वजन घटाउन लागेकालाई आलु नखाने सल्लाह दिइन्छ । तर, मिलाएर खाए आलु वजन बढाउन मात्र होइन, घटाउन पनि उत्तिकै उपयोगी हुन्छ । यो कुनै वैज्ञानिक प्रयोग होइन, ‘पोटेटो डाइट’ प्रयोग गरेर वजन घटाएकाहरुको दाबी हो । सन् २०१६ मा यस सन्दर्भमा ‘पोटेटो ह्याक : वेट लस..
काठमाडौँ, १० भदौ कामको मामलामा सबै मान्छेको धारणा समान हुँदैन । कोही पाईलट बन्न चाहन्छन् भने कोही खेती किसानी गरेरै आफूलाई स्थापित गर्न चाहन्छन् । तर सबैको समान चाहना हुन्छ आफ्नो काममा कसरी सफल हुने ? भनिन्छ, सफल हुने चाहना सबैको हुन्छ । सफल त्यस्ता व्यक्ति मात्रै हुन्छन् जो सही समयमा उपयुक्त निर्णय गर्न सक्छन् र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छन् । कुनै पनि..
एजेन्सी, ९ भदौ जुनसुकै मौसम होस्, स्वास्थ्यका लागि ध्यान दिनु निकै जरुरी हुन्छ । र, यसका लागि मेवा खानु फाइदाजनक हुन्छ । आयुर्वेदिक नजरमा पनि मेवा अत्यन्त खास फल हो । मेवा खानाले शरीरको रगत शुद्ध हुने मात्र होइन, पेटदेखि लिएर छालासम्म राम्रो हुन्छ । मेवा भिटामिन युक्त हुन्छ र यसले एन्टी अक्सिडेन्ट तथा फाइबरको पनि काम गर्छ । रगत जम्नबाट रोक्ने मेवाले..
अछाम, ९ भदौ । चौरपाटी गाउँपालिकामा २० वर्ष उमेर नपुग्दै गर्भवती हुनेको सङ्ख्या धेरै रहेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को तथ्याङ्कअनुसार गाउँपालिकामा २३.४६ प्रतिशत २० वर्ष उमेर नपुग्दै गर्भवती हुने गरेको देखिएको हो । एक वर्षको अवधिमा वडा नं १ मा रहेको चौरमाण्डौ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा १६७ गर्भवती मध्ये ४१ जना उमेर नपुग्दै गर्भवती भएको तथ्याङ्क फेला परेको हो ।..
वीरगञ्ज, ८ भदौ सात वर्षीया चन्द्रज्योतिकुमारी रामको दैनिक जीवन बाख्रा चराउन, घाँस दाउरा तथा मेलापात गर्नेमा बित्थ्यो तर प्रदेश नं २ सरकारले ‘बेटी बचाऔँ बेटी पढाऔँ’ कार्यक्रम ल्याएपछि उनको आकर्षण पढाइतर्फ बढेको छ । अन्य विद्यार्थीजस्तै उनीपनि छिपहरमाई गाउँपालिका–१ मिर्जापुरस्थित श्रीदेवीस्थान नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयमा कक्षा १ मा भर्ना भइन् । प्रदेश नं २ को सरकारको यो महत्वपूर्ण योजना ८ वटै जिल्लामा..
काठमाडौँ, ६ भदौ आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका अधिकांश भू–भागमा वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । मनसुनको न्यून चापीय रेखा पश्चिमी भू–भागमा औसत स्थानभन्दा केही उत्तरतर्फ सरेकाले मध्य र पूर्वीका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका वरिष्ठ मौसमविद् बरुण पौडेलले बताउनुभयो । “बाँकी स्थानमा सामान्यतया हल्कादेखि मध्यम वर्षाको..
काठमाडौँ, ६ भदौ आजकाल स्वास्थ्यका लागि भन्दा पनि स्वादका लागि खाना खाने बानी बढ्दो छ । अहिले हाम्रो खानपान शैली एकदमै खराब छ । हामी धेरैजसो चिल्लो, पिरो, अमिलो, मसलेदार, तारेको, भुटेको, प्याकेटबन्द खानेकुरा खाने गर्छौं । कति खाने र कसरी खाने भन्ने कुरामा हामीलाई खासै हेक्का पनि छैन । भोक लागेको बेला होस् वा आफूलाई मिठो मसिनो लागेको बेला, पेट चर्कने..
नेपालगञ्ज, ६ भदौ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले नेपालगञ्जलाई प्लास्टिकमुक्त शहर बनाउने अभियान थालेको छ । उक्त उपमहानगरपालिकाको यो अभियानमा सहयोग पुर्‍याउने भनी यहाँका राजनीतिक दलहरुले पनि लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अभियानअन्तर्गत उपमहानगरपालिकाले प्लास्टिकजन्य फोहरले गरेको असर र यसको निकासका लागि ‘ऐना फोटो प्रदर्शनी विभिन्न सूचना, शिक्षा तथा सन्दर्भ सामग्रीहरु तयार गरेर नगरका चोकचोकमा झुण्ड्याएको छ । गैरसरकारी संस्थाहरुसँग सहकार्य गरेर विकल्पका रुपमा कपडा..
एजेन्सी, ४ भदौ रुघा लाग्दा तारन्तार हाच्छ्युँ आउँछ । तर हाच्छ्युँको यति मात्र कारण छैन । यो एउटा शारीरिक प्रक्रिया हो । दुवै राम्रो र नराम्रो संकेतका रूपमा हेरिने यो गलत समयमा हाच्छ्युँ गर्दा अशुभ हुन्छ भनेर कोहीकोही रोक्न खोज्छन् । तर यसो गर्नु गलत हो । हाच्छ्युँ रोक्दा शरीरलाई नोक्सानी हुन्छ । हाम्रो शरीरको रोगप्रतिरोधात्मक क्षमताकै एक अंग हो हाच्छ्युँ ।..
कावासोती, ४ भदौ नवलपरासी पूर्वको देवचुली नगरपालिकाले तलबको दश प्रतिशत रकम आफ्ना आमाबुबाको खातामा जम्मा गर्नुुपर्ने नीति लिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानका लागि नगरपालिकाले नगरसभामामार्फत् चालू आर्थिक वर्षबाट आफ्नो तलबको दश प्रतिशत रकम आमाबुबाको खातामा जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको हो । नगरपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समेत यस विषयलाई समावेश गरेको छ । सोही आधारमा नगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गरी नगरपालिकाका..
काठमाडौँ, ३ भदौ डायबिटिज अर्थात्, मधुमेह एक गम्भीर समस्या हो । यो कुरा सबैलाई थाहा छ । डायबिटिजका रोगीले आफ्नो खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । किनकि, खानामा भएको सामान्य गल्ती पनि बिरामीका लागि खतरनाक साबित हुन सक्छ । नेपालमा धेरैजसो घरमा अन्य खानेकुराभन्दा चामलको नै बढी प्रयोग गरिन्छ । तर, चामल सेवन मधुमेह रोगीका लागि हानिकारक हुन सक्छ । स्वस्थ्यविज्ञ भन्छन्, चामलमा..
३ दिनसम्म मेघ गर्जनसहित भारी वर्षाको सम्भावना, होसियारी अपनाउन आग्रह
काठमाडौँ, ३ भदौ मनसुनको न्यून चापीय रेखा औसत स्थानमा रहेकाले सो प्रभावले देशका अधिकांश स्थानमा मनसुनी वर्षा भइरहेको छ । हाल देशका अधिकांश स्थानमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाले आज विशेष बुलेटिन जारी गर्दै उक्त प्रणालीको प्रभावका कारण तीन दिन देशको अधिकांश स्थानमा मेघ गर्जनसहित..
बेझाड, ३ भदौ । छोरा जन्माउने आशै आशामा पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका–१ हुँगीका ६७ वर्षीय सुमित्रा विकले १३ सन्तानको जन्म दिनुभएको छ । तेह् वर्षको उमेरमा २८ वर्षीय नरबहादुर विकसँग विवाह बन्धनमा बाँधिएकी सुमित्रा १५ वर्षको उमेरमा आमा बनिन् । छोरा नजन्माउँदा समाजले नानाथरी नकारात्मक कुराहरु गर्न थालेपछि विकले १२ छोरी र एक छोराको जन्म दिनुभएको हो । नवौं सन्तानका रुपमा छोरा..
धुम्रपानको कुलतबाट छुटकारा पाउन यस्ता उपायहरु अपनाउनुहोस्
काठमाडौँ, २ भदौ धुम्रपानबाट वर्षेनी विश्वमा धेरै मानिसहरुले ज्यान गुमाउँछन् । धुम्रपान सेवनलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले विभिन्न नितीनियमहरु कार्यान्वयन गरिरहेको हुन्छ र पनि धुम्रपान गर्नेको संख्या उल्लेख्य छ । कैयौ व्यक्तिहरु धुम्रपानको लत हटाउन धेरै प्रयास गरिरहेपनि सफल हुँदैनन् । धुम्रपानको कुलतबाट कसरी छुटकारा पाउने ? उपाय निम्न छन् : १. बिहान उठ्नासाथ २ गिलास मनतातो पानी कागती र मह राखेर पिउनाले..
गर्मीमा एसीको प्रयोग : कसरी असर गर्छ शरीरलाई ?
काठमाडौँ, २ भदौ विभिन्न प्रकारका विद्युत्तीय उपकरणहरुको प्रयोग गरेर हामीले आफ्नो जीवनलाई सहज बनाएका छौं । यस्ता विद्युत्तीय उपकरणहरुले हाम्रो काम सजिलो र छिट्टो गर्न सहयोग पुर्याउँछ । त्यस्ता उपकरणहरु मध्ये एयर कन्डिसनर (एसी) पनि एक हो । हिजो-आज एसीको प्रयोग हरेक ठाउँमा भएको पाइन्छ । प्रारम्भमा अफिसहरुमा मात्र प्रयोग हुने एसी अचेल घर, कार, बस जस्ता हरेक ठाउँमा प्रयोग हुन थालेका..
वर्षौँपछि गाउँमा खानेपानी, स्थानीयवासी खुशी
जाजरकोट, १ भदौ बारेकोट गाउँपालिका लैखम खालकाटीयाकी ५५ वर्षीया भद्रकला खत्रीको आधा जीवन खानेपानीको गाग्री बोकेरै बित्यो । उहाँलाई घरको अन्य कामकाजभन्दा पनि पानीकै चिन्ताले सताउने गरेको थियो । सोही ठाउँकी कमला खत्रीको पनि पीडा उस्तै थियो । पानीकै लागि ठूलै सङ्घर्ष गर्नुपरेको कमलाले बताउनुभयो । घर नजिक पानी नहुँदा दुई घण्टा टाढा नमेलाखोला जानुपर्ने बाध्यता थियो भद्रकलालाई । भद्रकला र कमला..
आफ्ना बालबच्चालाई धेरै सुकिलो मुकिलो राख्न पनि हानिकारक हुनसक्छ
काठमााडौँ, ३२ साउन एउटा बच्चा, जसलाई आमाबुवाले अति नै स्यहारसुसार गरेर राखेका छन् । उनलाई जथाभावी खेल्न दिइदैन, छुन दिइदैन । धुलो, पानी, फोहोरको सम्पर्कमा आउन दिइदैन । अलिकति पनि फोहोर-मैला हुन दिइदैन । उनलाई हरक्षण सुकिलो मुकिलो राखिन्छ । उनको खानपानमा पनि आमाबुवा अति नै सर्तक छन् । ताजा र सफा खानेकुरा मात्र ख्वाइन्छ । अरुको हातबाट बनेको खानेकुरा खान दिइदैन ।..
काठमाडौंँ, ३२ साउन शनिबार बेलुकादेखि देशभर ३ दिनसम्म भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविद्ले बताएका छन् । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद् समीर श्रेष्ठका अनुसार आज बेलुका मनसुनको न्यून चापीय रेखाको पश्चिमी कुना आफ्नो औसत स्थानबाट उत्तर सर्ने सम्भावना रहेकाले नेपालमा बेलुकादेखि पर्सिसम्म मौसमी गतिविधि तीव्र हुने देखिएको हो। ‘आज बेलुका न्यून चापीय रेखाको पश्चिमी कुना आफ्नो साविक स्थानबाट केही उत्तर आउने देखिएको छ,’ शनिबार..
गर्मिमा काखीलाई सफा र गन्धरहित राख्ने सरल उपाए
काठमााडौँ, ३२ साउन सौन्दर्य महिलहरुको सबैभन्दा ठूलो गहना हो । सुन्दर महिलाहरु भीडमा अलग देखिन्छन्, उनीहरुमाथि हरेक आँखा अडिने गर्छ । तर, सुन्दरता भन्नाले अनुहार मात्र आकर्षक हुनु हो भन्ने सोच्नु हुन्छ भने तपाईं गलत हुनुहुन्छ । सुन्दरता त्यसलाई भनिन्छ जसले आफ्ना शरीरको हरेक अंगलाई सफा र सुन्दर राख्छ । जसमा अन्डरआम्र्स अर्थात काखी मुनिको भाग पनि एक हो । कालो काखीले..
विवाह अगाडि आफ्नो हुनेवाला जीवनसाथीसँग यी ५ प्रश्न सोध्न आवश्यक
काठमाडौँ, ३१ साउन बिवाह पछि सम्बन्धमा असमझदारी, तनाव, झगडा हुन सक्छ । यसको मूख्य कारण भनेको अक्सर पैसा हुने गर्दछ । यस्तोमा बिवाह अगाडि नै फाइनान्सियल विषयमा खुलेर कुराकानी गर्नु राम्रो हुन्छ । प्रेम विवाह होस् वा मागी विवाह यी दुबैमा यो गर्नु आवश्यक छ । यदि तपाई हुनेवाला जीवनसाथीलाई राम्ररी जान्नु हुन्न वा लामो समयदेखि जान्नु हुन्न भने पैसासँग सम्बन्धित प्रश्न..
काठमाडाैं। सबै कुरामा परनिर्भर रहेकाे भनिए पनि नेपाल आँखाकाे लेन्स उत्पादनमा भने आत्मनिर्भर भएकाे मानिन्छ। नेपालमा २५ वर्षदेखि आँखाको लेन्स उत्पादन हुँदै आएको छ । मोतीबिन्दुका बिरामीलाई चाहिने लेन्स भने तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानले उत्पादन गर्छ । अष्ट्रेलियामा रहेको फ्रेडल फाउन्डेसनको प्राविधिक सहयोगमा तिलगंगा आँखा अस्पतालमा आँखाको कृत्रिम लेन्स उत्पादन सुरु गरिएको हो । २०५२ सालअघि भने लेन्स महंगोमा किन्नुपर्ने बाध्यता थियो ।..
शरीर हरक्षण स्वस्थ र फुर्तिलो राख्न यसरी गरौं दिनको सुरुवात
काठमाडौं, ३१ साउन । अहिले हामी उठ्ने समयप्रति उति ख्याल गर्दैनौं । बिहानभर न्यानो ओछ्याउन छाड्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने सोच्छौं । बिहान घाम झुल्किएपछि आँखा त खोल्छौं तर ओछ्यान छाड्न जाँगर चल्दैन । जब हामी सामाजिक सञ्जालमा जोडिन्छौं, त्यहाँ नानाथरीका प्रसंगहरु फेला पर्छन् । भिडियो हेर्न थालेपछि त्यहाँ अनेकथरीका सामाग्रीहरु भेट्छौं । अब हामी ति सामाग्री हेर्दाहेर्दा आफ्नो मुड बदल्न पुग्छौं ।..
पुरुषका यस्ता १० गुण जसले महिलाहरु हुरुक्कै हुन्छन् !
काठमाडौँ, २९ साउन धेरै पुरुषहरु यो सोचिरहेका हुन्छन् की महिलाहरुलाई कसरी आकर्षित पार्ने भनेर । तर उनीहरुलाई सहि तरिकाहरु थाहा नहुन पनि सक्छ । महिलाहरुले कस्ता गुण भएका पुरुषहरुलाई मन पराउछन भन्ने विषयमा धेरैजसो पुरुषहरुले ध्यान दिएको पाइन्छ । यही विषयलाई ध्यान दिएर वैज्ञानिकको टोलिले महिलाहरुले पुरुषमा चाहने गुणका बारेमा अनुसन्धान गरेका छन् ।अनुसन्धानबाट बैज्ञानिकहरुले पुरुषबाट महिलाले चाहने १०गुण पत्ता लगाउन सफल..
काठमाडाैं । धन हाम्रो भौतिक जीवनका लागि अपरिहार्य छ । दैनिक गुजाराका लागि मात्र होइन, जीवनलाई सहज र सरल बनाउनका लागि धन चाहिन्छ। हुन त जीवनमा विद्याको महत्व पनि सामान्य रहँदैन। तर, धन र विद्याको आ–आफ्नै अलगअलग महत्व छ। विद्याले हामीलाई बौद्धिक रुपमा सम्पन्न तुल्याउँछ। त्यसैगरी धनले भौतिक जीवनलाई सम्पन्न तुल्याउँछ। यी दुबै एकअर्काको परिपूरक पनि हुन्। भनिन्छ नै, ज्ञान विनाको..
Results 740: You are at page7of 25